Iyo ECB inosarudza kusapindira kunyangwe kudzikira | Ehupfumi Zvemari
ECB inosarudza kusapindira kunyangwe ichidzikira
Zvese zvinoramba zvakangofanana mumutemo wezvemari mudunhu reyuro, mushure memusangano wapfuura uyo European Central Bank (ECB). Pamusangano wevatori venhau, mutungamiri wadzo, Mario Draghi, akataura kuti musangano wedare "wanga usiri kushanda." Iko, zviyero zvemitero zvaive pane zvakadzikira, pakati pe0% ne0,4%. ECB yakadzokorora kuti vanotarisirwa "kuramba vari pamatanho azvino kusvika kumagumo kwe2019." Nekuda kweichi chiito, Mario Draghi pachake achange achitarisira kukwira kweramangwana, sezvo nguva yake ichizopera muna Gumiguru wegore rino.
Kune rimwe divi, kubvumidzwa kweEU chete kubhengi kwaive kwekuti ECB yakabvuma kuti iri kudzidza kuvhurwa kwerwendo rutsva rwekutengesa mari kumabhangi. Ndokunge, kuvandudzwa kwezvikwereti zvine mamiriro akanaka kana chii chakafanana, iine kukwikwidza kwemari yemubereko kupfuura zvino. Asi zvakawandisa zvanyadzisa chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari vaitarisira danho rine simba rekuita mashura ekuderera kwehupfumi munzvimbo ino.
Pakanga paine tarisiro yakawanda mumisika yemari yekuti pakupedzisira vakaodzwa mwoyo nemhedziso dzeEU. Semhedzisiro yechiito ichi mudanho reEuropean Central Bank, maitiro emisika yezvemari anga ari ekuodzwa mwoyo zvine mwero. Kunyangwe pasina kusimba pakuderedzwa kwemitengo, kunyangwe mune iwo emubhengi chikamu kubva kudonha kwavo kwave kuri pakati nepakati. Nekuderera uko mune yakaipisisa mamiriro akasvika 1%. Kuva chikamu chemusika wemasheya chakanyanya kukanganiswa nezvakataurwa kubva kubhangi rekuEurope rinoburitsa.
1 ECB: mitengo yezvibereko inoramba yakafanana
2 Kukanganisa pamusika wemashamba zvikamu
3 Maelectric ari kuhwina
4 Kufanotaura kwegore rino
5 Shanduko pakupera kwegore
6 Kuchinja kukuru mumusika wekutengesa
ECB: mitengo yezvibereko inoramba yakafanana
Muchokwadi zvese zvinodzikira kuchokwadi chekuti mwero wemubereko muiyo euro zone unoramba uri padanho rakaenzana sezvavave kuita kusvika zvino. Ndokunge, pamatanho ari padhuze ne0%, zvinoreva kuti kukosha kwemari kuri kuita zero. Nepo kune rimwe divi, iyi mamiriro emari ekuti zvikwereti zvinoratidza maitiro akanaka kwazvo kune avo vanonyorera. Nechikonzero chiri nyore, uye izvo ndezvekuti zvinokubatsira iwe kuzadzisa zvido zvakanyanya zvinoenderana nezvaunotarisira. Kana chii chakafanana nemari isingadhuri iyo ichavabatsira kuitira kuti mwero wechikwereti usanyanya kudaro, zvirinani munguva pfupi.
Nepo kune rimwe divi, iri zano rezvemari harina kunakira zvido zvemapoka ezvemari nekuti ivo vanowana mashoma mabhenefiti kubva kuchizvarwa chemakadhi ese echikwereti. Ehezve, chokwadi ichi chichava neshanduko yakanangana nesitatimendi chako chemari mukota yega yega uye nenzira iyi inogona kukanganisa kukosheswa kwemasheya ako mumisika yemari. Izvo, pakupedzisira, varimi ndivo vangangonyanya kubatwa nezviyero izvi zvakatorwa mukati meEuropean Central Bank.
Kukanganisa pamusika wemashamba zvikamu
Hapana mubvunzo kuti chero chiyero chemari kana shanduko inoratidzwa mumisika yemari. Uye zvingave zvishoma sei, neizvi zvinoitika zvakafanana. Nedzimwe zvikamu zvemasheya zvinouya zvinokunda uye zvinokundwa munharo iyi mune yakakwira mari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Nechekugadzirisa kunonzwisisika mumitengo yezvikamu zvakanyorwa pamusika wemasheya, sezvo kune rimwe divi zvine musoro kufunga uye zviri kuitika mazuva ano.
Mupfungwa iyi, zvakakodzera kutaura kuti chikamu chakanyanya kubatwa nekusasimba muEuropean Central Bank chiri iwo mabhanga. Kunyangwe maitiro avo anga asiri iwo asina kunaka aigona kutarisirwa mune idzi kesi. Nekuderera kushoma kwakatungamira kumitengo yemabhangi iri kutodzika pane kutanga kwegore. Ichi ndicho chikonzero nei vamwe vashoma uye varipakati varimari vafunga kutora chinzvimbo muchikamu kuyedza kuita kwavo kuita kunobatsira mune yakati rebei kana shoma nguva.
Maelectric ari kuhwina
Pane kupokana, makambani emagetsi ndiwo akahwina akajeka ezviitiko zvakajairika aine huwandu hwakaderera hwemubereko uye padyo ne0%. Nechikonzero chiri nyore kwazvo chekutsanangura uye icho chiri nekuda kwenzvimbo yepamusoro yechikwereti iyo makambani aya akabvumirana. Iye zvino zvinovabatsira kwazvo kuti chiitiko ichi chienderere mberi, zvirinani kwemamwe mashoma mwedzi kuyedza kubhadhara chikwereti chavo nemamiriro ari nani mukuhaya kwavo. Idzi inhau dzakanaka dzinofanirwa kugamuchirwa nemakambani akanyorwa echikamu chakakosha chemari munyika yedu. Asi chokwadi chave chakanyatsosiyana.
Iko kuwedzera kwakamirirwa kwenguva refu mumakambani emakambani emagetsi hakuna kuitika nekuda kwechinhu chiri nyore kunzwisisa uye kuti ndezvekuti aya mamodheru akasimuka zvakanyanya mumwedzi yapfuura. Nezvibereko zvinosvika makumi matatu muzana mune zvimwe zviitiko uye izvo zvadzosera chikwereti chechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Kumatanho asingafungidzirwe makore mashoma apfuura. Iwe haugone kukanganwa kuti mamwe emakambani aya parizvino ari mumamiriro ekukwira mapaundi. Ndiyo yakanyanya kunaka inogona kuitika mukuchengetedzeka kwemisika yemari. Hazvishamisi kuti ivo havasisina akakosha ekumirisana mberi.
Kufanotaura kwegore rino
Kufungidzira kwakaitwa nedhipatimendi rekuongorora kweBankinter pane kuyerera kwemari kunoenda munzira imwechete. Sezvo kutenderera kuri kurasikirwa nesimba muEMU, nekuda kwekudzikisa kwekunze kudiwa. GDP yakawedzera kusvika + 2,1% muQ2, zvichienzaniswa ne + 2,4% muQ1 uye + 2,5% paavhareji muna 2017. Kunze kwenyika kunonoka kusvika + 3,2% vs + 5,5% muna 2017. Zviratidzo zvekutungamira uye kuvimba zvinodzora mwero wekudzikira, mushure memwedzi yekudzikira.
Chero zvazvingaitika, zvinoramba zviri pamatanho epamusoro, izvo zvinobvumidza kuvimba mukuenderera kweyakawedzera kutenderera. "Kukura kwedu kwekufungidzira kwe2019 ikozvino + 1,8% zvichienzaniswa ne + 1,9% kare." Vanotaura zvakare kuti “Hatitarisiri kuti ECB ichinje nzira yayo. Kutengwa kwemidziyo (15.000 mamirioni euros pamwedzi) kuchazopera muna Zvita. Kunyangwe kupera kweQE, mutemo wezvemari ucharamba uchigadziriswa, kuburikidza nekuvakwazve kwemari uye kutungamira kwekutungamira pamitero yezvibereko. Kana iri inflation, iyo yepakati CPI (+ 0,9%) ichiri kure nechinangwa cheECB (padhuze asi pazasi pe2%). Nekudaro, kumanikidzwa kwemutengo kwemukati mavambo (mari yemubhadharo,…) kuri kuwedzera, izvo zvinoderedza kusava nechokwadi nezvehupenyu hwavo hweramangwana.
Shanduko pakupera kwegore
Kufungidzira kwebhangi reSpanish kuri mumutsetse wekuti maererano nezinga rereferenzi, tinogona kuona kufamba kwekutanga kusvika kumagumo kwe2019 kubva parizvino 0,0% kusvika ku0,10%. Ye2020 tinoona nyowani zvishoma nezvishoma kuwedzera uko kwaizoisa chiyero chakatenderedza kutenderera 0,40% pakupera kwegore. Zvishoma muzvifungidziro zvave zvichikura kubva kuEuropean Central Bank, sezvakangoonekwa mumusangano wekupedzisira wedare repamusoro rebhengi rinoburitsa kondinendi yekare.
Ichave panguva chaiyo iyoyo, mavanogona kushandura matafura muzvikamu zvemari inoshanduka yenyika. Mupfungwa yekuti mabhangi anogona kutangazve nzira yekumusoro iyo yavakasiya makore mazhinji apfuura. Kuve chimwe chezvikamu mune izvo zvakakosha kuti uzviise pachezvako kuti uwane purofiti inobatsira pamwe nekubudirira kukuru. Nekuti kukosha kwakakosha mumitengo yavo kunotarisirwa. Kusvika padanho rekuti rinogona kuve rimwe remapoka anobatsira kwazvo kutanga gore rinouya. Kunyanya tichifunga nezve mutengo wemutengo wavari kutengesa nawo panguva ino chaiyo.
Kuchinja kukuru mumusika wekutengesa
Nepo kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti chokwadi ichi chinodzikisa zvikamu zvemusika wemasheya zvinoratidza chikwereti chakakura, senge makambani emagetsi, sezvatakambotaura. Kuti ivo vagone kupinda mune ine njodzi zvakanyanya kudzika kwemhepo kune zvido zvevadiki nepakati varimi vatora zvinzvimbo muchikamu. Nechiitiko chakasiyana zvachose kubva kune izvo zviri kuraramwa panguva ino. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei kuisa mari mumusika wemasheya kuchifanira kutorwa nekuongorora mashandiro enguva pfupi. Kuti udzivise mamiriro asingadiwe echikamu chinoshanda chavo.
Maitiro aya anofanirwa kutitungamira kuti tishandure zano redu mukuvaka kwenzvimbo dzekuchengetedza. Kubudikidza neanoshanda anoshanda manejimendi anotibvumidza kuchinjika kune ese anogona mamiriro ezvehupfumi. Zvese zviri zviviri zvakanakisa uye izvo zvisina kuwanda. Iko mune chero zvazvingaitika, mikana yebhizinesi ichaenderera ichioneka mumisika yequity kuti isatambiswe nevashandisi. Kusvika padanho rekuti rinogona kuve rimwe remapoka anobatsira kwazvo kutanga gore rinouya. Kunyanya tichifunga nezve mutengo wemutengo wavari kutengesa nawo panguva ino chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » ECB inosarudza kusapindira kunyangwe ichidzikira
Zvekuita nemari yedu yatakachengeta paIsita?
Banco Sabadell panguva yakaoma: inotengesa pazasi peeuro